Vakatungamira Kuvhenekerwa, Vakatungamira Panel Light, Vakatungamira Linear Mwenje - Lightman
Nei Sarudza Lightman
LED Panel mwenje
Edge-lit LED Panel Chiedza
Kudzoka-kubatidza LED Panel Chiedza
UL & DLC LED Panel Chiedza
Dimmable LED Panel Chiedza
CCT Tunable LED Panel Chiedza
Mvura isina magetsi Panel Chiedza
Framless & Sky LED Panel Chiedza
Multifunctional LED Panel Chiedza
Kumusoro Round LED Panel Chiedza
Yepamusoro Square LED Panel Chiedza
Kaviri Ruvara LED Panel Chiedza
Big kutenderera akatungamira wepaneti light
LED mutsara mwenje
Yakadzokororwa ne LED Linear Mwenje
Yakamiswa LED Linear Mwenje
Kumusoro Kwakagadziriswa LED Linear Mwenje
UVC Sterilizer Mwenje
UVC-B Sterilizer Mwenje
UVC-C Sterilizer Mwenje
Mobile UV Sterilizer Mwenje
UVC Sterilizer Bhokisi
Infrared Induction UVC Sterilizer Mwenje
Chimbudzi UVC Sterilizer Mwenje
Hofisi & Imba Yemusangano
Chikoro & University Dzidzo
Utano Huchengetedzwa & Yakachena Kamuri
Chitoro & Chitoro & Supermarket
Gym & Nzvimbo Yemitambo
Subway & Chitima Chitima
Imba & Vamwe
Waterproof Series Chishandiso
Framless Series Kushandiswa
RGB & RGBW & RGBWW Chikumbiro
LED Panel Downlight Series Kushandiswa
Huru Kukura Panel Chiedza
Yakagadzirirwa Panel Mwenje Chikumbiro
Chigadzirwa Kuisa Gaidhi
Anogadzira ruzivo ane gore refu zviitiko mune akatungamira kupenya mwenje. Iyo inogadzira ine simba iyo ine iyo yakazara yakakwana chigadzirwa mitsara inovhara akawanda mhando dzekutungamira mapani mwenje. A nyanzvi kugadzira ane kugona kupa yakazara akatungamira mwenje mhinduro. Iyo yakavimbika inotungamira inogadzira vateveri kugutsikana nekusingaperi!
Hofisi & KUSANGANA ROOM
Lightman yakatungamira mapani emwenje zvinyoro nyoro uye yemazuva ano luminaire magadzirirwo anogadzira kushanda kwakanaka pamhepo uye maererano nekubudirira kwesimba, Lightman luminaires yakatarwa zviyero. Zvigadziriso zvemwenje yechi Lightman zvinoita kuti basa riitwe zviri nyore, riwedzere huwandu hwekugara zvakanaka mumahofisi uye nekucheka zvinoshanda pamusoro.
IP65 Mvura isina magetsi Panel Chiedza
Iyo IP65 LED pani mwenje yakagadzirirwa kushandiswa munzvimbo dzine guruva kana rakanyorova kana rakanyorova apo izvi zvisati zvave zvisingagoneki neyakajairika LED mapanera. Inokodzera nzvimbo dzinonaya, senge imba yekuvhiya, freezer uye kicheni, yekushambidza imba nezvimwewo zvakanakira kusangana nezvinodiwa zvekamuri yakachena.
RGBWW LED Panel Chiedza
Iyo inogona kugadzirisa RGB ruvara uye kuchinja tembiricha kupisa kubva inodziya chena kusvika chena kutonhora ine dimmable basa. Wireless kure kure kudzora chinogona kusvika 25-30 metres. Handheld control uye foni mbozha app control inowanikwa. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yemitambo, KTV, bara, skating rink, hotera, kindergarten, restaurant, nzvimbo yekuvaraidza.
LED Linear Mwenje
Akasiyana-siyana maratidziro senzira yekushongedza mativi uye magumo cap Continous isina kusimba splice yekugadzira dhiraivha yakareba Siriki, chena kana dema imba yedharo sarudzo yakasarudzika urefu hwayo, kurema kwayo 2400mm
Round LED Panel Chiedza
Sakanidza yakakwirira-kupenya ma LEDs akaunzwa Mitsubishi PMMA LGP ye Ultra-yakaonda, Risina mupendero dhizaini uye nyore kuisa yeaeomwe yezvishandiso.
Kusimudzira chiumbwa chimwe kuUSA kunogona kuchengetedza kanenge madhora manomwe pamwedzi.
LED inoshandisa 85% mashoma simba pane halogen uye 18% yakaderera pane CFL.
LED inosvika kupenya yakazara ipapo ipapo, isina flicker kana kudziya-kumusoro.
Kugona kupa zvakakwana kwakatungamira mheni mhinduro.
AC100 ~ 277V 50W Yakamiswa LED Flat Ceiling Panel Chiedza 2 × 2
CE TUV 36W 300 × 600 LED Flat Ceiling Panel Chiedza
Indoor Kuvhenekera 60W Yakadzokororwa LED Flat Panel Chiedza 120 × 30
Makore mashanu Warranty 54W Chikamu che LED Slim Ceiling Panel Mwenje 60x60cm
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd ndeyenyika danho repamusoro-bhizimusi bhizinesi rine advanced LED luminaries kugadzira uye nzvimbo dzekuedza. Muna 2012, Lightman anogadzira OEM fekitori "LED Panel Lighting Co, Ltd." izvo zvinoita OEM kurongeka kwemakambani uye epasi rose emakambani emwenje. Iyo kambani inonyanya kukoshesa muchengeterwo wepaneru LED inopa tekinoroji uye inopa mutsetse wakakwana weaipaneru magetsi epa LED.
Kutora Maindasitiri Ekuvaka, iyo 3nd Industrial Park, Guangming District, Shenzhen Guta, Guangdong Province, 518106, PRChina